कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज वैशाख २७ गते शुक्रबारको राशिफल ! - PUBLICAAWAJ
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज वैशाख २७ गते शुक्रबारको राशिफल !
प्रकाशित : बिहिबार, बैशाख २६, २०७६१७:२८ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
वि.सं. २०७६ साल वैशाख २७ गते। शुक्रबार। इश्वी सन् २०१९ मे १० तारिख। शकसंवत् १९४१। परिधावी संवत्सर। उत्तरायण। वसन्त ऋतु। नेपाल संवत् ११३९ बछलाथ्व। वैशाख शुक्लपक्ष। तिथि– षष्ठी, २१:३२ बजेउप्रान्त सप्तमी। नक्षत्र– पुनर्वशु, १४:३३ बजेउप्रान्त तिष्य। योग– शूल, १६:५६ बजेउप्रान्त गण्ड। करण– कौलव, १०:३५ बजेदेखि तैतिल, २१:३२ बजेउप्रान्त गर। आनन्दादिमा लुम्ब योग। चन्द्रराशि– मिथुन, ८:५२ बजेउप्रान्त कर्कट। काठमाडौंमा सूर्योदय– ५:२० बजे, सूर्यास्त– १८:४२ बजे र दिनमान ३३ घडी २३ पला।
कुनै नयाँ कार्य प्रारम्भ गर्नको लागी प्रातःकालको समय अनुकुल रहनेछ । आज सरकारी लाभ हुने सम्भावना छ । व्यापारमा व्यावसायिक लाभ हुनेछ । व्यवसायीका शिर्ष अधिकारी उनीहरुबाट प्रशन्न हुनेछन् । विचारमा शिघ्र परिवर्तन आउनेछ । मध्याहन पश्चाता मनको दृढतामा कमि आउने हुँदा विचारमा रुमल्लिनु हुनेछ ।
आजको दिन तपाइँको लागी मध्यम फलदायी रहनेछ । मित्र तथा स्नेहीजनको साथ भेटघाटले मन आनन्दप्रद रहनेछ । आजको दिनको अधिकांस भाग धन सम्बन्धित योजना बनाउनमा बित्नेछ ।
आर्थिक दृष्टिकोणबाट आजको दिन लाभदायी रहनेछ । मित्र एवम् परिवारजनको सहयोगले आजको दिन आनन्दमय बनाउनेछ । उत्तम भोजन र वस्त्रको सुविधा मिल्नेछ । मनमा कुनै पनि प्रकारको निषेधात्मक विचार आउन नदिनु होला । व्यवसाय र व्यापारमा अनुकुल वातावरणले मन प्रशन्न हुनेछ । दिन भर मनमा उत्साह तथा स्फूर्ति रहनेछ ।
आर्थिक दृष्टिकोणबाट आज य भन्दा अधिक खर्च हुनेछ । आँखाको पिडाले सताउनेछ । साथै मानसिक चिन्ता पनि रहनेछ । वाणी तथा व्यवहारमा संयम राख्नु होला । मध्याहन पश्चात समस्यामा परिवर्तन आउनेछ ।आर्थिक दृष्टिकोणले लाभदायी दिन रहेको छ । पारिवारिक वातावरण पनि राम्रो रहनेछ । मनमा नकारात्मक भावना आउन नदिनु होला ।
प्रातःकालको समय निकै राम्रो रहनेछ । सामाजिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा आनन्दप्रद र लाभप्रद समाचार मिल्नेछ । मित्रको तर्फबाट शुभ समाचार मिल्नेछ । आयमा वृद्धि हुनुका साथै धन लाभ हुनेछ ।अकस्मात हुने योग छ । मानसिक चिन्ता रहनेछ । परिवारजन र सन्तानको साथ मनमुटाव हुन सक्दछ । स्वास्थ्यमा खराबी आउनेछ ।
दिन अनुकुल रहनेछ । परिवारजनको साथ प्रेमपूर्ण सम्बन्ध रहनेछ । मित्र तथा स्वजनको तर्फबाट उपहार मिल्नेछ । मध्याहन पश्चात वाणी र व्यवहारमा परिवर्तन आउनेछ । अकास्मातको संभावना छ । कुनै रमणीय स्थलमा प्रवासको आयोजना हुन सक्दछ । विवाहोत्सुकको लागी अपेक्षित जीवन साथी मिल्नेछ ।
शारीरिक रुपले शिथिलता र आलस्यको अनुभव हुनेछ । सन्तानको सक्थ मतभेद हुन सक्दछ । मध्याहन पश्चात कार्यालयको वातावरणमा सुधार हुनेछ । शिर्ष अधिकारीगणको कृपादृष्टिले लाभ हुनेछ अत: पदिन्नतीको पनि सम्भावना छ । सामाजिक क्षेत्रमा मन-सम्मान प्राप्त हुनेछ । स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ ।
आध्यात्मिकता र इश्वरको प्रार्थनाले अनिष्टबाट छित्कारा प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ । शारीरिक र मानसिक रुपले अस्वस्थ अनुभव गर्नु हुनेछ । मानहानि नहोस् यसको ध्यान राख्नु होला । वाणीमा संयम राख्दा परिस्थिति अनुकुल बन्नेछ । व्यावसायिक क्षेत्रमा आपत्ति आउन सक्दछ ।व्यवसाय मा प्रतुकुल स्थिति रहेको अनुभव हुनेछ ।
आज विचारको गतिशिलताबाट द्विविधाको अनुभव गर्नु हुनेछ । जस कारण कुनै ठोस निर्णयमा आउन सक्नु हुने छैन । नोकरी धन्दाको क्षेत्रमा आजको दिन प्रतिस्पर्धा युक्त रहनेछ । नयाँ कार्य शुरु गर्ने प्रेरणा मिल्नेछ । नयाँ कार्य आरम्भ गर्न सक्नु हुनेछ । लेखन कार्यको लागी राम्रो दिन छ । आज बौद्धिक तथा तार्किक विचार विनिमय को अवकाश मिल्नेछ ।
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज कार्तिक २४गतेको राशिफल
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज कार्तिक २२ गतेको राशिफल